Marcos Alonso oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea, kaddib imaatinka Frank Lampard – Gool FM
(London) 19 Luulyo 2019. Daafaca garabka bidix ee reer Spain Marcos Alonso ayaa xaqiijiyay inuu ku faraxsan yahay joogitaankiisa kooxda Chelsea, si uu meesha kaga saaro wararka xanta ah ee ku aadan suurtogalnimada uu kaga dhaqaaqi karo Blues.
Marcos Alonso oo 28 jir ah ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda Chelsea xagaagan, wararkii ugu dambeeyay ayaana waxay tilmaameen in xiddigan uu dib ugu laabanayo dalkiisa hooyo, iyadoo ay xiiseenayaan kooxaha Barcelona iyo Atletico Madrid.
Balse waxay u muuqataa in Marcos Alonso uusan dooneynin inuu baxo, maadaama uu xiiseenayo inuu la shaqeeyo macalinka cusub ee kooxda Blues Frank Lampard xilli ciyaareedka soo socda.
Hadaba Marcos Alonso oo ka hadlayay mustaqbalkiisa kooxda Chelsea ayaa wuxuu yiri:
“Waxaa xaqiiqo ah inaan sii joogi doono Chelsea, waxaan qandaraas cusub u saxiixay kooxda sanadkii hore, waana ku faraxsanahay inaan halkaan joogo”.
“Ma aqaano wax ku saabsan xiisaha kooxaha qaar ee daneenaya inay ila saxiixdaan”.
“Waxaa heshiiskeyga kooxda Chelsea ka harsan afar xili ciyaareed kale, runtii waan ku faraxsanahay inaan halkaan joogo, saddexdii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay waxay ii aheyd mid fantastik ah aniga ahaan”.
“Waxaana doonayaa wax intaas ka sii badan, waxaana doonayaa inaan sii ciyaaro oo aan kula guuleysto Chelsea tartamo badan”.
Waxaa xusid mudan in heshiiska Marcos Alonso ee kooxda Chelsea uu dhamaanayo xagaaga 2023.
Juventus oo lacago iyo saddex ciyaaryahan u soo bandhigtay Manchester United si ay heshiiska Pogba ugu garaacdo Real Madrid
“Haddii uu dib ugu laabto Coutinho kooxda Liverpool, wuxuu kala kulmi doonaa cadaadis badan” - Rivaldo